Xafladda Caleema saarka Bugta ahaa Oo Dib loo dhigey Markale – hareerley News
Maalmihii la soo dhaafay waxaa la hadal haayey in Arbacada soo socota ee todobaadkaan Magalada Kismaayo lagu qabanayo Xaflada Caleema-saarka Bugta ahaa Ee Hogaamiyihii hore ee Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe hayeeshee waxaa la sheegay in dib loo dhigay.
Waa markii labaad oo dib loo dhigo Xaflada bugta ah Ee Caleema-saarka dhowr arrimood oo lagu sababeeyay Awgood oo ay qeyb ka yihiin dowladda Soomaaliya oo doorashadii ka dhacday jubbaland qaadacday sidoo kalena Garoonka ka celisay xubno kaqeyb-geli lahaa Xaflada iyo khilaafka xoogeystay Ee Dowladda iyo Maamulkii hore ee Jubbaland.
Xildhibaan C/risaaq Axmed Maxamed Jindi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Risaala u xaqiijiyey in dib loo dhigay Xaflada Caleema-saarka Axmed Madoobe oo Arbacada todobaadkaan lagu qaban lahaa Kismaayo.
Xildhibaanka ayaa waaa uu sheegay in sababta dib u dhaca ay keentay,kadib markii sida uu sheegay siyaasiyiin doonayey inay ka qeyb-galaan Xaflada ay dowladda Soomaaliya u diiday inay ka dhoofan Magaalada Muqdisho si ay u aadaan Magalada Kisamayo.
Masheegin Xildhibaanka oo kamid ahaa wafdigii dhawaan tegay Kismaayo oo ay kamid ahaayeen Hogaamiyeyaashii hore ee Galmudug Cabdi Kariin Guuleed iyo K/Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo Xaflada Caleema-saarkan.
Maamulka Puntland Oo kordhisey Bandowga Saaran Puntland.
Hogaamiyaha Puntland Ahna Guddoomiyaha Guddiga Puntland u qaabilsan diyaar-garowga iyo ka hortagga Covid-19, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa galabta Shir-guddoomiyey kulanka Guddiga diyaar-garowga iyo Ka hortagga ee Coronavirus. Hogaamiyaha Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan Qasriga Madaxtooyada ee Garoowe, ayaa Shirkan ku-guddoomiyey hab maqal iyo muuqaal ah iyadoo Guddi hoosaadkasta oo Guddiga ka mid […]
Magaalada Mandheera oo laga helay kiisas Coronavirus ah
Posted on April 7, 2020 April 7, 2020 Author Hareerley News
Waxaa la xaqiijiyay labo qof oo uu ku dhacay cudurka Coronavirus kuwaas oo ku nool magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi bari ee Kenya, sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee Kenya. Labadan qof ayaa la sheegay inay kasoo safreen magaalada Mombasa ee ku taalla gobolka xeebta. Wasiirka wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in 14 qof oo hor […]
Guddiga soo diyaarinta Sharciga doorashooyinka oo kulamo ka wada Muqdisho:-(Sawiro)